FETIM-PIRENENA 26 JONA : Efa vonona handraisana ny matso ny Kianja Barea
Hampiantrano ny matso mandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena amin’ny 26 jona ny Kianja manara-penitra Barea-Mahamasina, araka ny voalazan’ny Filoham-pirenena, nandritra ny fitsidihany ity kianja ity, ny talata 15 jona lasa teo. 22 juin 2021
Tsy mbola fitokanana kosa io anefa. “Amin’ny fotoana hafa, rehefa resy tanteraka ny coronavirus vao hataontsika mitorajofo ny fety hitokanana ity kianja ity, ka hiarahana mifaly amin’ny vahoakan’Antananarivo sy ny vahoaka Malagasy iray manontolo”, hoy ny voalazany.
Mikasika ny kianja kosa dia nomarihiny fa na inona na inona tenenina, na inona lazaina, nametraka zavatra ho an’ny taranaka isika ary raha ny 150 taona dia mbola azo ampiasaina tsara izao zava-bita izao. Naharitra ora iray mahery ny fitsidihana ny Kianja Barea Mahamasina nataon’ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina, ny talata lasa teo. Nandritra izay no nilazany fa : « tratra ny tanjona , hisitraka fotodrafitrasa manara-penitra ny Malagasy ».
Hita ao amin’ity Kianja Barea ity avokoa ny efitrano tsy maintsy takina ny hisiany amin’ny kianja manara-penitra tahaka itony. Ao, ohatra, ny efitrano fisoloana ho an’ny mpitsara baolina, ny ekipa andaniny sy ankilany, ny efitrano fanaovana fitiliana ho an’reo atleta mihinana fanafody mampatanjaka, ohatra, na koa amin’izao Covid-19 izao. Ao ihany koa ny efitrano fikaomandiana ny jiro sy ny hazavana, ny feo manerana ny kianja fa indrindra ireo fakantsarimihetsika na “caméras de surveillance”. Tsy hisy hiafina intsony izay zava-mitranga eo amin’io kianja io na anatiny na ivelany no sady azo ampanakaikezina (zoom)­ izany sary izany. Ao amin’ny rihana voalohany no ahitana ireo efitrano natao ho an’ny mpanao gazety mijery baolina na koa mitantara mivantana ny fizotry ny lalao raha any ambany indrindra ny efitrano fanaovana valandresaka.
Any amin’ny rihana ambony indrindra kosa dia misy efitrano fandraisam-bahiny izay azo andraisana ny ekipam-pirenena mandritra ny fampivondronana azy ireo na koa handraisana ireo vahiny amin’ny lalao iraisam-pirenena raha tsy hiteny afa-tsy ny kaomiseran’ny lalao na koa ny mpitsara.
Nirary soa ho an’ny Barea
Nirary soa sady nampahery ny Barea moa izy satria ireo dia vory lanona tao an-toerana ary tonga nitsena sy nandray ny Filohan’ny Nosy teo am-pahatongavana ary nifanotrona taminy tamin’ny fitsidihana sy fitetezana ireo zava-bita samihafa tao an-toerana. Nitarika izany ny mpanazatra Eric Rabesandratana. Teny an-toerana ihany koa ny filoha lefitra faharoan’ny FMF, ny Governoran’ Analamanga, ny Ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra ary mpiara-miasa maro avy eny anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika. Nanolotra fahatsiarovana ho an’ny Filoham-pirenena moa ny Barea ka ny “maillot” laharana faha-10 amin’ny anaran’i Neymar no natolotra tamin’izany. Nisy kosa ny fametrahan’ny Filoham-pirenena ny soniany tamin’ny baolina roa nentin’ireo mpilalao ireo.
Tsy nohetsehina ny vatomasina
Mbola ao ary tsy nakisaka na noravana araka ny tsaho aelin’ny sasany ny vatomasina izay tandindon’ny Fanjakana malagasy hatramin’ny faha-mpanjaka ary koa nanoloran’ny Jeneraly De Gaule ny taratasy milaza ny fiverenan’ny fahaleovantenantsika tamin’ny Filoha Philibert Tsiranana, tamin’ny 26 jona 1960. Nahatsapa ny hasin’izy ity avokoa ny rehetra nanatanteraka ny tetikasa no sady efa nomena toromarika ka tsy nikitika na namindra toerana izany.
Nambaran’ny Filohan’ny Repoblika nandritra ny fitsidihana omaly ihany koa fa misy “box” na toeram-pivarotana hahafahana mivarotra finday na kojakoja ara-panatanjahantena eny an-toerana, misy trano fisakafoanana ary ny trano fandraisam-bahiny araka ny efa voalaza tetsy ambony. Izany no natao dia mba hahafahana mampidi-bola ihany koa hikoja-kojana ny kianja. Nampahatsiahivin’ny­ tahirin-tsary omaly fa ny fitsenana nakotroka ny Barea teo anoloan’ny kianjan’i Mahamasina tamin’izany rehefa avy niatrika ny CAN tany Ejipta ka mby hatramin’ny ampahefa-dalana no nivoahan’ny fanamby fa hatao manara-penitra na ny gradin na ny bozaka na ny jiro satria tsy araka ny maha-kianja filalaovana iraisam-pirenena azy.
Vonona handray lalao
Ankehitriny, tanteraka izany fanamby izany, efa eo ampitsiriana ny bozaka handraisana an’i Bénin amin’ny fiandohan’ny volana septambra, efa eo am-pametrahana manontolo ny seza eny amin’ny “gradin” raha efa voapetraka avokoa ny eny amin’ny “tribune”. Efa araka ny tokony ho izy ny jiro sy ny fanamafisam-peo. Raha akapoka, sivifolo isan-jaton’ny asa no efa vita.